Wax ka ogow noloshii adkeyd ee Goolhayaha Kooxda Chelsea Edouard Mendy… (Maxaa ka jira inuu Yaanyo goobeyn jiray? Mise la socotaa in Wakiilkiisu uu Taleefanka ku dhegeystay?) – Gool FM
Haaruun November 28, 2021
(Chelsea) 28 Nof 2021. Warbixintaan cusub waxa aan kaga hadli doonnaa qiso ku dayasho mudan oo ku saabsan ciyaaryahan waqtigu ka hiiliyay, balse aan quusanin illaa uu bartilmaameedkiisii gaaray.
Dadka caanka ah ee oo nolosha heer ka gaara waxaa jirta xilli adag oo ay soo mareen, mar ay quus istaageen oo ay dhammaan albaabadu ay ka soo xirmeen, laakiin waxa ay muujiyeen dadaal iyo halgan dheeraad ah, marnabana ma aysan is dhiibin iyagoo maanka ku hayay in ay leeyihiin kartrida ay maalin uun ku gaari karaan hadafkooda.
Goolhayaha caalamiga ah ee kooxda Chelsea iyo xulka Senegal ee Edouard Mendy ayaa halgan dheer u soo maray heerka uu maanta taagan yahay ee ah inuu ka mid yahay goolhayeyaasha ugu fiican kubadda cagta caalamka, waxaa jirtay xilli la bah dilay, mar la yiri war kubbad waxba kama taqaanide shaqo kale raadso, laakiin isagu mar walba waa isku kalsoonaa.
Edouard Mendy waxa uu 1992-kii ku dhashay waqooyiga Faransiiska, waxaana iska dhalay qoys noloshoodu iska hooseyso (Aabe Guinea-Bissau u dhashay iyo Hooyo Senegal ah), yaraantiisii qoyskiisu waxay dareemeen in uu kubadda cagta jecel yahay, waxaana markii uu 13 jirsaday ay ka soo qoreen kuliyadda kooxda Le Havre ee waddanka Faransiiska, oo ah Akaademiyad ay ka soo bexeen xiddigaha kubadda cagta sida Paul Pogba iyo Riyad Mahrez.
Waxa uu yaraantiisii jeclaa inuu ka dheelo weerarka oo uu goolal dhaliyo, laakiin waxaa maalin maalmaha ka mid ah uu tababarihii Le Havre uu ka codsaday in uu goosha galo, maalintaas ayaana la ogaaday booskiisa saxda ah, waxa uu ku soo baxay goolhaye kubbad joojiye ah, isagoo ay bogaadiyeen ciyaartoyda kale ee kooxdiisa.
Laakiin niyad jabkii ugu horreeyay ee Mendy uu la kulmay ayaa ahayd markii ay u sheegeen in goolhayaha koowaad ee naadiga Le Havre uu noqonayo Zakaria, goolhaye Mendy arrintaa wuu diiday, wuxuuna sheegay in uu is muujin doono, muddo kaddib waxa uu ku biiray kooxda heerka hoose ee CS Municipaux Le Havre, Go’aankaasi halista ah waxa uu u horseeday in uu helo heshiiskiisii ugu horreeyay ee xirfadle kubadda cagta ah oo uu la galay kooxda heerka saddexaad ee Cherbourg, sidoo kale waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu Mendy ka fogaado qoyskiisa.
Saddex xilli ciyaareed oo uu goolhaye Mendy u ciyaarayay kooxda Cherbourg waxa uu u dheelay 26 kulan, sanadkii 2014-kii waxaa dhammaaday heshiiskii uu Mendy kula joogay kooxda Cherbourg isagoo aan ku faraxsanayn naadigaasi, waxa uuna go’aansaday in uu markale ka tago naadigiisa raadsadana koox kale.
Mendy maadaama walaashii ay ku nooshahay Ingiriiska waxa uu ku riyoon jiray in uu mar uun ka ciyaaro Horyaalka Premier League, waxaa ballan qaad fiican u sameeyay wakiilkiisii, hase yeeshee wuxuu akhbaar wanaagsan sugaba wax jawaab ah waa ka waayay wakiilkiisii, wax kale iska daaye hal mar xitaa ma uusan ka soo wicin taleefoonka, taa waxaa ka sii darnayd markii Mendy uu isku dayay inuu la xiriiro wakiilkiisa balse nasiib darro waxaa lagu dhegeystay Koolka.
Aakhirkii maalin ayaa Mendy waxa uu wakiilkiisii u soo diray farriin uu qorneyd “Nasiib wacan ayaan kuu rajaynayaa mustaqbalka”, middaasi waxay niyad jab ku noqotay Mendy.
“Ciyaartoyda iyo dadka kaleba kuma fiicna shaqo la’aantu, in aad shaqo la’aan noqotana waxay ka dhigan tahay dharbaaxo wejiga lagaaga dhuftay, guuldarrooyinku waxa ay shaki gelinayaan in aad sii wadato ciyaarahaaga iyo in kale” ayuu Mendy bishii Maarso 2018-kii u sheegay ‘So Foot’.
Wiilkii dhallinyarada ahaa ee hamiga sare lahaa ayaa mar qura noqday mid shaqo la’aan ah oo qaata lacagta Faransiiska ay ugu talo galeen dadka shaqo la’aanta noqdaa ama shaqadoodii hore ka dhammaato.
Waxaa kaloo uga sii darnaa markii ay saaxiibtiis u sheegtay in ay uur u leedahay oo ay sugayaan canuggoodii ugu horreeyay, Mendy waxa uu ku sigtay in uu isboortiga oo dhan isaga baxo noqdo ganacsade yar oo khudaarta iibiya, gaar ahaan Yaanyada.
Mendy oo dhanka waxbarashada heer fiican ka gaaray oo ay waalidkiisna ku soo dadaaleen ayaa la kulmay qolyaha caawiya shaqo la’aanta si ay talooyin u siiyaan bal si uu markale shaqo u heli lahaa, waxaa la weydiiyay xirfaddiisa iyo wuxuu jecel yahay inuu qabto wuxuu u sheegay inuu yahay ciyaaryahan goolhaye ah, waxay ku yiraahdeen “Ciyaartooynimo iyo kubbad iska jooji ee bal shaqo kale oo caadi ah raadso”.
Goolhaye Mendy waa uu diiday in uu hal bacaad lagu lisay ka dhigo halgankiisii dheeraa ee kubadda cagta, riyadiisiina ay noqoto dhalanteed, waxa uu ku noqday kuliyaddii Le Havreee uu ciyaaraha ka soo billaabay bal si uu tababar ula qaato, waxaa la siiyay fursad ahayd in maalinkii iyo habeenkiiba uu tababar ku qaato kuliyadda, maalinkiina uu tababarto, habeenkiina uu booskiisa goolhaye ka ciyaaro.
Saaxiibkiis ay isku dhow yihiin ayaa waqtigaa Mendy u soo bandhigay shaqo ahayd inuu ka xamaasho dukaan dharka lagu iibiyo, Mendy markale waa uu diiday shaqadaasi, isagoo isku kalsoonaa hankiisuna aad u sarreeyay.
Mendy oo shaqo raadis ah ayaa garaacay albaab walba, waxaana uu la kulmay saaxiibkiis Ted Lavie oo ay soo wada ciyaareen, Ted Lavie wuxuu yiri waxaan aqaannaa nin tababare ah oo tababara goolhayeyaasha kooxda Marseille ninkaas oo lagu magacaabayay Dominic Bernatovic, kaas oo uu Ted Lavie ku qanciyay ugana sheekeeyay kartida goolhaye Mendy iyo inuu ku haboon yahay naadigaasi.
Dominic waxa uu markaa raadinayay qof buuxiya booska goolhayaha saddexaad ee Marseille, waxaana ay arkeen waxtarka Mendy, iyagoo is weydiiyay sida ay ku dhici kartay inuu koox la’aan ahaado.
Weli waxa uu Mendy doonayay in uu sii hor mariyo xirfaddiisa ciyaareed, waxaana uu heshiis rasmi ah ka helay naadiga Reims, kulankii ugu horreeyay ee Mendy ee kooxda Reims ayaa waxaa daqiiqaddii 5-aad kaarka cas loo taagay goolhayihii koowaad ee naadigaasi Johan Liébus, waxaana halkaa fursad dahabi ah ka helay Mendy.
Goolhaye Mendy ayaa si heer sare ah isu muujiyay illaa uu noqday goolhayaha koowaad ee kooxda Reims isagoo kooxdaasi ka caawiyay in ay timaaddo heerka Ligue 1 ee Horyaalka Faransiiska, sidoo kale waxaa Mendy looga yeeray xulka Senegal ee lagu naanayso ‘The Lions of Teranga).
2019-kii waxa uu Mendy heshiis la galay kooxda Rennes ee isla Horyaalka Faransiiska isagoo jiitay indhaha taageerayaasha markii 9 kulan oo ka mid ahaa 24-kii kulan ee uu u ciyaaray wax gool ah laga dhalin waayay, waxaana uu Ren soo gaarsiiyay kaalinta 3-aad iyagoo boos ka helay Champions League.
Goolhaye Mendy waxaa u soo dhacay taleefan, waxaana soo wacay goolhayihii hore ee kooxda Ren ee Petr Čech, kaas oo hareereeyay Ingiriiska, illaa uu noqday goolhayaha ugu wanaagsan, isagoo ugu baaqay inuu yimaado Chelsea, kama laba labeyn goolhaye Mendy, waxaana uu xir xirtay boorsadiisii isagoo bishii September ee 2020 ku biiray naadiga Chelsea.
Haatan cid walba waa ay taqaannaa magaca goolhayaha 1.94 mitir ah ee Mendy oo magiciisa ku qoray diiwaanka taariikhda, kuna biiray goolhayeyaasha ugu fiican waqti xaadirkan ee caalamka.
Qisada Mendy waxaan ka baran karnaa in uusan qofku niyad jabin oo halgankiisa nolosha uu wado illaa uu ka gaarayo hadafkiisa kama dambeysta ah.